Izixhobo zokuBhala ngokuQulunqwayo ezi-10 zokuThengisa okumangalisayo | Martech Zone
Kunzima ukufumana amagama afanelekileyo okuchaza amandla kunye nokubakho konke kokubhalwa komxholo. Wonke umntu ufuna umxholo osemgangathweni kwezi ntsuku-ukusuka kubhlogi be-amateur ukuya kwiinkampani zamanye amazwe ezizama ukukhuthaza iimveliso kunye neenkonzo zabo.
Ngokwengxelo, iinkampani ezibhloga zifumana I-97% ngaphezulu amakhonkco kwiiwebhusayithi zabo kunabalinganiswa babo abangabhlogi. Olunye uphononongo lutyhila ukuba ukufaka ibhlog njengeyona nto iphambili kwiwebhusayithi yakho kuya kukunika ithuba elingcono lokuba kwi-434% ikwindawo ephezulu kwiinjini zokukhangela.
Kodwa ukuze ube ngumbhali ophumeleleyo, kuya kufuneka usebenzise imeko yeapps kunye neeplagi. Abancedisi bedijithali banokukunceda ukuphucula ukubhala kwakho, ke qhubeka ufunda ukuze ujonge izixhobo ezili-10 zokubhala ezinomxholo wentengiso emangalisayo.
1. Ibhlogi yesihloko seBlog
Ukufumana umxholo umxholo omtsha akukho lula ukuba kuya kufuneka upapashe iiposti veki nganye okanye yonke imihla. Kunjalo ngoba Hubspot phuhlisa iGenerator yesihloko seBlog ukunceda ababhali ekufumaneni isihloko esifanelekileyo seendawo zabo. Inkqubo ilula kakhulu: ngenisa igama eliphambili kwaye isixhobo siya kukubonisa izimvo ezininzi.
Umzekelo, singenile urhwebo kwaye ndafumana ezi ngcebiso zilandelayo:
Ukuthengisa: Ukulindela kunye neNyaniso
Ngaba intengiso iyakuze ilawule umhlaba?
Into enkulu elandelayo kwintengiso
Ukuthengisa kuchazwe ngoonobumba abangaphantsi kwe-140
IHubpot Ibhlogi yesihloko seBlog I-Blogger yesihloko seFATJOE Blog
2. Isixhobo segama eliphambili
Ukuba ufuna ukubona ukuba izinto zisebenza njani ngaphandle kwesiCwangcisi segama eliphambili kuGoogle, sicebisa ukuba uvavanye esi sixhobo segama eliphambili. Iqonga liyakwazi ukuvelisa ngaphezulu kwe-700 yeengcebiso zamagama aphambili kwigama ngalinye lokukhangela.
Esi sixhobo asikubuzi nokuba wenze iakhawunti ekhethekileyo, ukuze usisebenzise simahla simahla amaxesha amaninzi njengoko ufuna. Into onokuyilindela kwisixhobo segama eliphambili kukuchonga ngokukhawuleza olona phendlo luqhelekileyo kuGoogle kwaye ufumane amagama aphambili ahambelana ngokupheleleyo neemfuno zabaphulaphuli bakho.
Isixhobo segama elingundoqo
Nantsi enye yeentandokazi zethu, Ukunyaniseka. Eli qonga lenzelwe nina nonke nomoya okhululekileyo ngaphandle phaya onwabele ukusebenza ngaphandle kweofisi kodwa engenakho ukuwufikelela. Ukuqina kubuyela kwakhona kwizandi zekhefi ukukhulisa ubuchule bakho kunye nokukunceda usebenze ngcono.
Inika uluhlu olubanzi lwezandi ezivakalayo, ukusuka ekuseni ukumbombozela kunye neCafé de Paris ukuya kwiindawo zokulala ngexesha lesidlo sasemini kunye neBrazil bistros. Ukuqina kukunika imvakalelo yokusebenza komoya opholileyo kwaye opholileyo, osisikhuthazo sokwenene kubabhali abaninzi.
Ukuzibekel 'amangomso ngumbulali wemveliso, kodwa zikho iindlela zokujongana nale ngxaki, nazo. Hlala ugxile ekunyuseni imveliso yakho ngokunciphisa umda wexesha onokulichitha kwiiwebhusayithi ezichitha ixesha. Ingaba isebenza kanjani?
Imilinganiselo ye-plugin oyichitha kwi-Intanethi kwaye uvimba zonke izinto kwakamsinya nje ukuba ixesha elisetyenzisiweyo lisetyenzisiwe. Inyanzela abo bathintela izinto ukuba bajolise kwimisebenzi yabo kwaye ibancede bazalisekise imisebenzi kunye neenjongo zemihla ngemihla. Sibulela esidlangalaleni abantu esisebenza nabo e Umhlaba wokubhala isincoko ukusazisa ngesi sixhobo simangalisayo!
5. I750 Words
Phantse amawaka angama-500 ababhali kwihlabathi liphela basebenzisa amagama angama-750 njengomncedisi obalulekileyo wokubhala. Esi sixhobo senziwa ngenjongo enye kuphela-ukunceda iibhlog zamkele umkhwa wokubhala mihla le. Kanye njengoko igama layo libonisa, indawo ikhuthaza abadali bokuqukethwe ukuba babhale ubuncinci amagama angama-750 (okanye amaphepha amathathu) yonke imihla. Ayinamsebenzi into oyibhalayo ngalo lonke ixesha usenza rhoqo. Injongo icacile: Ukubhalwa kwemihla ngemihla kuya kuza kuwe ngokuzenzekelayo emva kwexesha.
6. Ukukhawuleza Isincoko sam
Ukubhala iiposti zebhlog kunzima, kodwa ukubhala amanqaku akumgangatho ophezulu kunzima nangakumbi. Kungenxa yoko le nto abanye ababhali besebenzisa iRushmyessay, iarhente esebenzisa uninzi lwababhali abanamava kuwo onke amabakala obuchule.
Craig Fowler, umntu ozifunela intloko Imisebenzi yase-UK yokuNyusaUtshilo uRushmyessay ikakhulu uqesha abantu abanezidanga ze-Master okanye ze-PhD abaqinisekisa ukuhanjiswa ngokukhawuleza kunye nomgangatho ophezulu. Eyona nto inomtsalane kukuba iRushmyessay ibonelela abathengi ngenkxaso yabathengi eyi-24/7, ukuze ukwazi ukuthumela umyalezo okanye ubatsalele umnxeba nanini na ufuna.
Rush Isincoko sam
7. Uphando Monkey
Ezona zithuba zibalaseleyo ziyonwabisa kwaye ziyabandakanyeka, ke ziyabakhuthaza abasebenzisi ukuba bathathe inyathelo ngokubuza imibuzo okanye ngokushiya izimvo. Ukuba ufuna ukwenza amanqaku asebenzisane ngakumbi, kuya kufuneka usebenzise iSurvey Monkey. Uyilo lophando olulula olukuvumela ukuba wenze ubugcisa kwaye upapashe iivoti zoluvo ezikwi-Intanethi ngaphakathi kwemizuzu. Ngale ndlela, unokuvumela abalandeli bakho ukuba bathathe isigqibo ngento ebalulekileyo kwaye bayisebenzise njengomthombo wokhuthazo kwizithuba zebhlog ezizayo.
Ukupapasha amanqaku ngaphandle kokuhlela ayisiyombono ilungileyo. Kuya kufuneka ujonge yonke into encinci yokubhaliweyo ukuze uqiniseke ukuba akukho sipelo okanye iimpazamo zegrama. Nangona kunjalo, lo inokuba ngumsebenzi otyhafisayo ukuba ufuna ukuyenza ngesandla, ke sicebisa ukuba usebenzise Igrama. Iplagi efundwayo efundwayo inokujonga zonke iiposti ngemizuzwana kwaye iqaqambise iimpazamo, isicatshulwa esintsonkothileyo, kunye nezinye iinkcukacha ezenza umxholo wakho ungafezekeki.
9. Abasebenzi baseGgrade
Ukuba awufuni umatshini wokuvavanya iimpazamo zakho, kukho esinye isisombululo esilula. Iza ngohlobo lweGgradeMiners, ukubhala kunye nokuhlela iarhente nenqwaba yabahleli abanezakhono. Kufuneka ubanike umnxeba kwaye baya kukuabela ngokukhawuleza umphathi weakhawunti othatha ityala. Sebenzisa le nkonzo, unokulindela into engaphantsi kokulungiswa kwemfezeko kunye nobulumko besitayile.
Isixhobo sokugqibela kuluhlu lwethu ngokuqinisekileyo sesona sinomdla kakhulu. I-Cliché Finder inceda ababhali ukuba bapolishe umxholo wabo ngokuchonga kunye nokuqaqambisa amagama okanye amabinzana asetyenzisiweyo. Uninzi lwabantu alunikeli ngqalelo kule ngxaki, kodwa uya kumangaliswa kukubona ukuba zingaphi ii-clichés ezikhoyo ekubhaleni kwi-Intanethi. Njengombhali onobuzaza, awufuni ukuyivumela le nto ukuba yenzeke nakuwe, ke sebenzisa uCliché Finder ukuphelisa isoyikiso.
Ezona bloggi zibalaseleyo azikho kuphela kubukrelekrele kwaye kuyilo kodwa ziyaphumelela ekusebenziseni ii -apps zokubhala kwi-Intanethi kunye nee-plugins. Oku kunceda ababhali ukuba babhale ngokukhawuleza kwaye benze amanqaku angcono iveki neveki, sisiseko esisisiseko sokuba ngumyili wenqanaba eliphezulu lomxholo.
Sikubonise uluhlu lwezinto ezili-10 zokubhala ezinokukunceda ukuphucula imisebenzi yakho yentengiso. Qiniseka ukuba uyabajonga kwaye ubhale uluvo ukuba unezinye iingcebiso ezinomdla onokuthi wabelane nathi ngazo!
Ukwazisa: Martech Zone Isebenzisa ikhonkco lokudibana kwi-Grammarly kweli nqaku.
tags: Isihloko seblog blogukuqinakhawulezisa isincoko samizixhobo zokubhala